Ndozi mebiri faịlụ Microsoft Excel
Editor Si NhọRọ December 9,2019
Ịwụnye Debian na windo VirtualBox
N'isiokwu a, ị ga-amụta otú e si wụnye VirtualBox Debian na igwe arụmọrụ - usoro sistemụ na kernel Linux. Ịwụnye Linux Debian na VirtualBox Otú a ịwụnye sistemụ ga-azọpụta gị oge na ihe onwunwe kọmputa. Ị nwere ike ịnweta ihe niile nke Debian n'ụzọ dị mfe n'enweghị ịgafe usoro mgbagwoju anya nke ịhapụ diski ike, n'enweghị ihe ize ndụ nke ịmebi faịlụ nke sistemụ arụmọrụ kachasị.
Esi tinye Windows 10 na VirtualBox
VirtualBox bụ mmemme nke na - enye gị ohere ịwụnye sistemụ arụmọrụ na ọnọdụ dịpụrụ adịpụ. Ịnwekwara ike ịwụnye Windows 10 ugbu a na igwe arụmọrụ iji mara ya ma ọ bụ iji nweta nnwale. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na - ekpebi ịlele nzaghachi nke "ọtụtụ" na mmemme ahụ ka ha nwee ike ịkwalite nkwalite ọrụ ha.
Ngwudata ngwanrọ na-enye gị ohere ịme ọtụtụ sistemụ arụmọrụ n'otu oge n'otu kọmputa, ya bụ, mepụta kpọmkwem ha. Onye na-ewu ewu kachasị mma nke software a bụ VirtualBox. Ọ na-emepụta igwe arụmọrụ nke na-agba ọsọ nke ọ bụla n'ime usoro ntanetị mara mma.